Ifem yeenqwelo moya yase-UK iChapman Freeborn ivula iofisi entsha yaseMoscow
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Ifem yeenqwelo moya yase-UK iChapman Freeborn ivula iofisi entsha yaseMoscow
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • iindaba • abantu • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ifem yeenqwelo moya yase-UK iChapman Freeborn ivula iofisi entsha yaseMoscow.
IRashiya yimarike ekhula ngokukhawuleza kwaye ikhula ngokwezoqoqosho. Ngokwemveli awona mashishini aphambili ibiyi-oyile negesi, imigodi kunye nokuveliswa koomatshini. UChapman Freeborn ubona ukwakhiwa kweenqwelomoya, imveliso ye-aerospace kunye ne-tech njengamashishini akhulayo, kunye neemoto kunye nezothutho.
Iofisi yaseMoscow ukuxhasa ukukhula kunye nezicwangciso zokwandisa ekuphenduleni ukuphuhlisa ngokukhawuleza imarike yaseRashiya.
UChapman Freeborn utyumbe uMaxim Tsarev njengoMlawuli Jikelele, eRashiya ukuba akhokele ishishini kule ndawo intsha.
I-Chapman Freeborn yaseRashiya iya kugxininisa kwiinkalo ezintathu zeemveliso eziphambili: I-Cargo, i-Passenger kunye ne-Private Jets kunye ne-OBC (kwi-Courier yeBhodi).
Ingcali yokuqesha iinqwelomoya zehlabathi UChapman Freeborn, inxalenye yeAvia Solutions Group, ivula eMoscow Iofisi ukuxhasa ukukhula kunye nezicwangciso zokwandisa ukuphendula kuphuhliso olukhawulezayo lwemarike yaseRussia. UChapman Freeborn utyumbe uMaxim Tsarev njengoMlawuli Jikelele, eRashiya ukuba akhokele ishishini kule ndawo intsha.
U-Eric Erbacher, umphathi weChapman Freeborn uthi:
"Rhashiya yimarike ekhula ngokukhawuleza kwaye iyakhula ngokwezoqoqosho. Ngokwemveli awona mashishini aphambili ibiyi-oyile negesi, imigodi kunye nokuveliswa koomatshini. Sibona ukwakhiwa kweenqwelomoya, imveliso ye-aerospace kunye ne-tech njengamashishini akhulayo, kunye neemoto kunye nezothutho.
Inyathelo lokuvula iofisi eMoscow yinxalenye yokukhula kwethu kwexesha elide kunye nezicwangciso zokwandisa. Ukuba ne-Chapman Freeborn ebekwe eMoscow kuya kusivumela ukuba sisebenze ngcono ngokucwangcisiweyo nabathumeli bempahla kunye nokuxhasa ezi marike zikhulayo ngokunikezela kwethu ngemveliso. ”
UMaxim Tsarev ujoyina ishishini emva kweminyaka eyi-10 kwi-DSV Global Transport and Logistics, apho waqhubela phambili kwisikhundla se-DSV Air & Sea Russia Sekela, uMphathi oLawulayo.
UMaxim Tsarev ugqabaza:
“Bendisoloko ndifumana indawo yothutho ngenqwelomoya kunye neyokuhamba ngenqwelomoya yinxalenye yezothutho kunye nolungiselelo yeyona nto inika umdla nenika umdla. Iyakhawuleza kwaye iguquguqukayo, kwaye ungabona iziphumo ngoko nangoko kwizithuthi zomoya. Lathi lakuvela ithuba lokuba ndingenele UChapman Freeborn, ndatsibela kuyo - ukuba ndibandakanyeke kwasekuqaleni, ngokuvulwa kweofisi entsha apha eMoscow, kunye nethuba lokuphuhlisa nokukhokela isicwangciso semarike yaseRashiya ngumceli mngeni onomdla."